Ogaden News Agency (ONA) – Qubanaha Wararka Ogadenya & Xaalada Maanta Kajirta.
Qubanaha Wararka Ogadenya & Xaalada Maanta Kajirta.
Xaalada guud ee Ogadenya ayaa maanta aad u dagan kadib dhibaatooyinkii shalay dalka ka dhacay taasi oo keentay khasaare naf iyo maalba leh oo meelo badan oo Ogadenya kamid ah ay ka dheceen.
Magaalada Jigjiga ayaa saaka aad u dagan iyadoo noloshu sidii caadiga ahayd ay kusoo noqotay, sidoo kale magaalooyinka Dhagaxbuur, Godey iyo Qabridahare oo kamid ahaa goobihii ay dhibaatooyinku saameeyeen shalay ayaa saaka aad u xasiloon oon wax shaqaaqo ah laga soo sheegin tan iyo wakhtigan xaadirka ah.
Shacabka Soomaalida Ogadenya ayay filansho waa ku noqotay duulaankii qaawanaa ee shalay uu ciidanka Gumaysiga Itoobiya kusoo qaaday Ogadenya iyo sidii khalkhalka iyo fawdada ay uga abuurtay dalka oo idil. Muwaadiniinta Soomaalida Ogadenya ayaa talaabo geesinimo leh kala hortagay faragalinta qaawan ee ciidanka Gumaysiga Itoobiya oo fashil kusoo idlaatay.
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa bayaan ay soo saartay si kulul ugu cambaaraysay falkii qaawanaa ee Gumaysiga Itoobiya uu ka fuliyay wadanka Ogadenya. Meelaha qaar waxaa la jaray khadkii isgaadhsiinta, korontadii iyo waliba biyihii. Dalka ayaa xaalad fawdo ah ay ka dheceen shalay.